बुटवलका विकासे योजना सुरक्षा प्रवन्धसहित धमाधम अघि बढाईंदै | Mechikali Daily
बुटवलका विकासे योजना सुरक्षा प्रवन्धसहित धमाधम अघि बढाईंदै
Posted By: रमेश पराजुलीon: २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १२:५३
बुटवल, जेठ २९ । बुटवल उप–महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध र सामाजिक दूरी कायम राख्दै विभिन्न योजनाका कामलाई अगाडि बढाएको छ । लकडाउनका कारण अन्यत्र काम रोकिएका बेलामा बुटवलमा भने सुरक्षा प्रबन्धसहित योजनाका काम धमाधम अगाडि बढेका छन् । उप–महानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिकसहितको टोलीको निगरानी गरेर सुरक्षा बन्दोबस्ती भए नभएको यकिन गर्दै निर्माणका काम सुचारु गरिएको बताए । उनले निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ता समितिलाई मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाइएको पनि बताए ।
सञ्चालनमा रहेका यस्ता कामको प्रमुख सुवेदी, उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य तथा सम्बन्धित वडाअध्यक्ष र विषयका प्राविधिकहरुले नियमित अनुगमन गरेका छन् । भने योजना सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा समुदायलाई पनि निगरानीमा खट्न आग्रह गरिएको छ । यीबाहेक वडा नं. ११ र १३ का वडा कार्यालय भवन, वडा नं. २ नाली निर्माण, स–साना पुल र विद्यालयका भवन निर्माणका कामलाई सुरक्षा उपायसहित निर्माण सुरु गरिएको छ । बुटवलको सिमसार क्षेत्र कपरकट्टी बैठौलियया तालमा दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरले सुरक्षा प्रबन्धसहित काम गरिरहेका छन् । यहाँ करिब डेढ करोड बराबरको काम भइरहेको उप–महानगरका प्रवक्ता तथा सो ताल रहेको वडा नं.१६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
यस्तै बुटवलको अर्को आन्तरिक वाइपासको मैत्रीपथको विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यहाँ करिब तीन करोडको बराबरको काम भइरहेको वडाअध्यक्ष जगदिशचन्द्र आचार्यले बताए । बुटवलको अर्को महत्वपूर्ण सडकका रुपमा रहेको श्रवणपथको पनि विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यसैगरी उजिरसिंह र नरसिंह टोल जोड्ने करिब ७० लाख बराबरको पुलको पनि निर्माण कार्य चलिरहेको छ भने त्यहीँ क्षेत्रमा व्यवस्थित नाली निर्माणको काम भइरहेको वडा नं. २ का अध्यक्ष रमेश नेपालले बताए ।
वडा नं ४ मा रहेको सुखौरा खोलमा बनिरहेको पुलले आदर्शनगर र थकाली समाजलाई जोड्ने छ । यहाँ पनि सुरक्षा प्रवन्धसहित निर्माणकार्य चलिरहेको वडा नं. ४ का अध्यक्ष टंकप्रसाद पराजुलीले बताए । कालिकापथसँगै लुम्बिनी बस टर्मिनल पछाडिको नाली निर्माणको काम भइरहेको वडा नं. ९ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर थापाले बताए । यस्तै बुटवलको मोतिपुरमा निर्माण हुने थारु संग्रहालय निर्माणको कामको पनि टेण्डरलगायतका प्रक्रिया पूरा भएका छन् । योसँगै त्यहाँ पनि निर्माणका काम सुरु हुने छन् ।
बुटवलको गौरवको आयोजना कालिका पथ नमुना बन्दै
लकडाउनसँगै रोकिएको बुटवलको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालिका पथ आन्तरिक वाइपास सडकको रोकिएको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । विश्वव्यापी महामारीसँगै रोकिएका योजनालाई सुरक्षाको प्रवन्धसहित बुटवलमा सुचारु गरिएको हो । बुटवलको वडा नं. ६ को कृषि उपज केन्द्र परिसरदेखि वडा नं. ९ र ११ को योगिकुटीसम्मको भित्री सडकलाई ८२ फुटको कायम गर्दै नमुना मार्ग बनाउने गरि उप–महानगरपालिकाले काम सुरु गरेको थियो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम भएसँगै बुटवलमा जनघनत्व र सवारी साधनको चाप बढ्दो छ । ट्राफिक जामको समस्याले भित्री सडकका उपभोक्ता र व्यवसायीहरु मारमा परिरहेका बेला बुटवलले यसखालको गौरवको आयोजना सुरु गरेको थियो ।
सडक क्षेत्राधिकारमा (राइटअफ वे) मा परेका संरचना हटाउने, नाली निर्माण गर्ने र कल्भर्ट निर्माणका काम अगाडि बढेका छन् । अहिले कालिका पथमा बुटवल उप–महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको मध्येको करिब दश करोड बराबरको काम भइरहेको छ । मुलुककै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र प्रदेशको अस्थायी मुकाम समेत बुटवलमै भएका कारणले मुख्य सडकहरुमा प्राय ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । कालिकापथ ८२ फुटको निर्माण भइरहेकाले पनि यसलाई बुटवल हाइवेका रुपमा लिइएको र समुदायको समेत प्रत्यक्ष निगरानी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए । वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीसहितका त्यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाले विकास निर्माणका कामको निगरानी गरिरहेका छन् ।
बुटवलको नमुना सडक बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बनाएर काम भइरहेको छ । अघिल्लो आवमै बनाएको डिपिआरअनुसार झण्डै एक अर्ब लागत लाग्ने छ भने अबको एक वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । डीपीआर बनाएसंगै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग सहकार्यको आग्रह गरिएको उप–महानगरले बताएको छ । उप–महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सुमन श्रेष्ठका अनुसार वाइपास सडकहरुलाई बुटवलको चक्रपथसँग जोड्ने गरी काम भइरहेको छ । बुटवलले चुरे पहाड र तराईलाई जोड्दै झण्डै ४५ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिरहेको छ ।
एक चरणमा काम गरिरहेको बबुल निर्माण कम्पनीले अहिले दैनिक १२ जना मजदुरलाई सुरक्षा प्रवन्धसहित काममा लगाएको छ । आवश्यकता अनुसार पालो बाँढेर प्राविधिक र मजदुरलाई पनि काममा खटाइने निर्माण कम्पनीका सञ्चालक किरण कार्कीले बताए । उनले नगरप्रमुख सुवेदीको निर्देशनबमोजिम मजदुरहरुको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षा प्रवन्धको व्यवस्था मिलाएर मात्रै काममा लगाइएको बताए । लकडाउनसँगै रोकिएको नाली निर्माणको कामलाई सुचारु गरिएको र अबको केही दिनमा नाली निर्माणको काम पूरा भएपछि कल्भर्टलगायतका काम सुरु हुने बताइएको छ ।
आवश्यकता अनुसारका प्राविधिक र मजदुरलाई गाडीमा सुरक्षित साथ आवातजावत गराएर काममा लगाइएको छ । अहिले नाली निर्माण गर्ने, फूटपाथ बनाउने काम तीव्र भइरहेको छ । पहिलो चरणमा नाली र फूटपाथ निर्माण सक्ने र लगत्तै पिचको काम सुरु हुने उप–महानगरले जनाएको छ । सुरुमा सडक क्षेत्राधिकार (राइटअफवे)मा परेका संरचना र विद्यतुका पोल हटाउन ढिलाई भएको थियो । अहिले यी सबै समस्या समाधान भएका छन् । विसं. ०५४ सालमा कालिका पथलाई ८२ फुटको कायम गर्नेगरी मापदण्ड बनाइएको थियो ।